Sulfuric Acid နှင့်သကြားဓာတုဗေဒဆန္ဒပြ
Sulfuric Acid နှင့်သကြားဆန္ဒပြ (သကြားရေဓါတ်ခန်းခြောက်)
လွယ်ကူသော & အံ့မခန်းဓာတုဗေဒဆန္ဒပြ
အများဆုံးအံ့မခန်းဓာတုဗေဒဆန္ဒပြပွဲများတစ်ခုမှာလည်းအရိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ်များနှင့်သကြား (sucrose) ၏ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ပါပဲ။ အခြေခံအားဖြင့်, သင်သည်ဤသရုပ်ပြဖျော်ဖြေဖို့လုပျလုံးကိုတစ်ဖန် beaker နှင့်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားအတွက်သာမန်စားပွဲပေါ်မှာသကြားထား အချို့စုစည်းအတွက် ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ် (သင်ထည့်သွင်းမတိုင်မီရေသေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူသကြားလြော့နိုင်ပါတယ် ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ် ) ။ အဆိုပါထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ်မြင့်မားစွာထဲမှာသကြားဓာတ်ကနေရေဖယ်ရှားပေး exothermic တုံ့ပြန်မှု အပူ, ရေနွေးငွေ့နှင့်ဆာလဖာအောက်ဆိုဒ်အငွေ့ထုတ်လွှတ်။
ဘေးဖယ်သည့်ဆာလဖာအနံ့ မှစ. , တုံ့ပြန်မှု caramel တူသောတွေအများကြီးအနံ့။ အဖြူရောင်သကြားဟာ beaker ထဲကသူ့ဟာသူတွန်းတဲ့အနက်ရောင်ကာဗွန်ပြွန်သို့လှည့်။ သငျသညျမြျှောလငျ့ထားရန်အဘယ်အရာကိုမြင်ချင်ပါတယ်လျှင်ဤတွင်, သင်တို့အဘို့ကောင်းတဲ့ youtube ကဗီဒီယိုကိုပါပဲ။
သကြားကိုသင်မော်လီကျူးကနေရေကိုဖယ်ရှားသည့်အခါဒါသငျသညျအခြေခံအားဖြင့်ကျန်ရစ်နေတဲ့ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်ပါသည် ကို elemental ကာဗွန်နှင့်အတူ ။ အဆိုပါ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်တုံ့ပြန်မှု ဖျက်သိမ်းရေးတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကို C 12 H ကို 22 အို 11 (သကြား) + H ကို2SO4(ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်) 12 ကို C (→ ကာဗွန် ) + 11 H ကို2အို (ရေ) + အရောအနှောရေနှင့်အက်ဆစ်
သကြားရေခန်းခြောက်ဖြစ်သော်လည်းရေတုံ့ပြန်မှုအတွက် '' ဆုံးရှုံးသွားသော '' မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်တချို့ကအက်ဆစ်ထဲမှာအရည်အဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တုံ့ပြန်မှု exothermic ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကရေအများကြီးရေနွေးငွေ့အဖြစ်ပယ်ပြုတ်သည်။
သင်ဤဆန္ဒပြပွဲပြုလျှင်သင့်လျော်သောလုံခြုံမှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျစုစည်းထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်အခါတိုင်း, သင်လက်အိတ်, မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းကုတ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ထိုသို့ချွတ်မီးရှို့ရာယဇ်တို့ကိုသကြားနှင့်ကာဗွန် scraping တစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ ခုနှစ်မှစ. အဆိုပါ beaker ဆုံးရှုံးမှုစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာအတွင်းသရုပ်ပြဖျော်ဖြေဖို့ဦးစားပေးမည်ရဲ့ တစ်အငွေ့ပါးပျဉ်း၏ ။
တစ်ဦးတိမ်တိုက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Make လုပ်နည်း
အပူပိုင်းရေခဲပြင်အသုံးပြုခြင်း Bubbly Ice Cream Make
အတု Glass ကို Make လုပ်နည်း
အသွေးအရောင်စုံမီးခိုးဗုံးလုပ်ငန်းခွင် Make လုပ်နည်း
ဒိုင်နိုဆောအကြောင်း 10 ဒဏ္ဍာရီ
Meiosis Lab ကသင်ခန်းစာအစီအစဉ်မော်ဒယ်
ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲသို့ကိုယ်တော်၏ဆရာအားနည်းချက်များ Turn နှင့်ယောဘကိုအင်တာဗျူးလက်သည်း
"ဒီ Baltimore Waltz" Themes နှင့်ဇာတ်ကောင်
Derek မင်းသားကဆုတောင်းချက် Warrior ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
ကို period table ပေါ်ဆိုဒီယမ် Element ကို (Na သို့မဟုတ်အနုမြူနံပါတ် 11)
မျိုးကွဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ပြည်သူ့အကြောင်း5အဖြစ်များသည့်ဒဏ္ဍာရီ
လန်သနမ်သည်အချက်အလက်နဲ့ -, La Element ကို
ကယ်လီဖိုးနီးယားကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်နှိုင်းယှဉ်
'' အယ်လ် '' တစ်ဦး Infinite လိုက်အသုံးပြုခြင်း
9 ခွဲ. မသန်စွမ်းအစိမ်းရောင်ကဒ် por VAWA မသန်စွမ်းvíctimasက de violencia doméstica
Commensalism - အဓိပ္ပာယ်, ဥပမာများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
နယူး Point ဖိနပ်ထဲမှာချိုးဖို့ကိုဘယ်လို
10 နာမည်ကြီးလက်ဝဲ-ပေးအပ်အဆိုတော်များ: ခွင့်သို့မဟုတ် Destiny?
ဗီဇပညာရှင် 10 ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ
တစ်ဦး Tarot စာဖတ်ခြင်းဘယ်လောက်သငျ့သလော
မြောက်ပိုင်းအရီဇိုးနားတက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Point Loma နာဇရက်မြို့သားတက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး